“သဘာဝကို လေ့လာပါ။ သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိုးပါ။ သဘာဝအတိုင်း နီးစပ်အောင်နေထိုင်ပါ။ သို့ဆိုလျှင် ဘယ်တော့မှ စိတ်မညစ်ရတော့ပါ”
– ဖရန့်လွိုက်ရိုက် (Frank Lloyd Wright)
တတ်နိုင်သမျှ အာဟာရစုံလင်သော အစားအသောက်များကို သင်က စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်အောင် အပင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့် မြေဆီလွှာသက်ရှိများ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပုံနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဏုဇီဝပိုး သန်းထောင်ပေါင်းများစွာက ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ပိုမိုထိရောက်စေနိုင်ပုံအကြောင်းကို MicrobeBio က ရှင်းပြပေးလိုပါသည်။ ဤသည်မှာ မြေဆီလွှာ၏ ဇီဝဗေဒအကြောင်း ထိုအချက်သည် အလွန် အရေးကြီးလှပါသည်။ အကြောင်းမှာ အပင်များသည် မြေဆီထဲမှ အာဟာရကို ရေမှတစ်ဆင့် စုပ်ယူသော်လည်း အာဟာရဓာတ်များက ရေထဲပျော်ဝင်ရန် လိုပါသည်။ သို့မှသာ ယင်းတို့ကို အပင်၏အမြစ်များက စုပ်တင်နိုင်ပါ၏။ အော်ဂဲနစ် အရာဝတ္ထုများနှင့် ကျောက်သားသတ္တုဓာတ်များထဲ၌ အပင်အာဟာရဓာတ်များ အတော်အတန် ပါရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ ရေတွင်မပျော်ဝင်သဖြင့် အပင်များက အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အချိန်ကြာလာသောအခါ မြေဆီထဲရှိ ရေတွင်ပျော်ဝင်သော အာဟာရဓာတ်များမှာ ကုန်ခမ်းလာပြီး အပင်များသည် သတ္တုဓာတ်များထဲရှိ အော်ဂဲနစ် အရာဝတ္ထုများထံမှ အာဟာရများကို ထုတ်ယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလာရပါတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ MicrobeBio® သည် ခေတ်သစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းသစ်များကို ပေးအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကျိုးပြု အဏုဇီဝပိုးမွှားများကို စုဆောင်းထားကာ ယင်းတို့ထဲမှ ၃၅+ မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖော်မြူလာများထဲတွင် စုစည်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လွှမ်းခြုံပါဝင်သော ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များမှာ ခေတ်မီသော တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအားဖြည့်ပေးသည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို ဖော်ဆောင်ပေးပြီး သဘာဝမဟုတ်သော ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုမှု ပိုမိုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ကြီးထွားမှုနှင့် ထွက်နှုန်းကိုလည်း ပိုများလာစေပါသည်။
MicrobeBio® ၏ မြေဆီလွှာပြုပြင်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ။ ။
ဇီဝဗေဒ နိုက်ထရိုဂျင် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း (Biological Nitrogen Fixation) – လေထဲမှ နိုက်ထရိုဂျင်ကို ရယူကာ ယင်းကို အဏုဇီဝပိုးမွှားများမှတစ်ဆင့် အပင်များက အသုံးပြုနိုင်သည့် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
ကန့်ဓာတ် ပျော်ဝင်စေခြင်း (Phosphate Solubilization) – မြေဆီလွှာထဲမှ မပြိုကွဲသေးသော ကန့်ဓာတ်ကို ပျော်ဝင်စေပြီး အပင်များ စုပ်ယူနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သည်။
ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော အပင်အာဟာရဓာတ်များကို စုစည်းပေးခြင်းနှင့် သတ္တုဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခြင်း (Mobilization and Mineralization of Available Plant Nutrients) – ဆား၊ ကန့်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ကယ်လ်စီယမ်ကဲ့သို့ မြေဆီလွှာ အာဟာရဓာတ်များကို စုစည်းပေးကာ သတ္တုဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး အပင်များက လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်သည့်ပုံစံ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သည်။
ဖိုင်တိုဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်ခြင်း (Phytohormone Production) – ရောဂါကင်းသော အပင်ဟော်မုန်းများ တိုးမြှင်ပေးရန်အတွက် ကာဘွန်ထုတ်ယူမှု (carbon sequestration) ကို အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
စပရိုဖိုက်များ ဖြည့်ဆည်းခြင်း (Saprophytic Competence) – စပရိုဖိုက်များသည် ပုပ်သိုးဆွေးမြည့်နေသော အရာဝတ္ထုများပေါ်တွင် ရှင်သန်ပါသည်။ ယင်းတို့သည် MicrobeBio ထုတ်ကုန်များထဲရှိ အဏုဇီဝပိုးမွှားများကို မြေဆီလွှာထဲရှိ အဏုဇီဝပိုးမွှားများနှင့် ပြိုင်ဆိုင်ပြီး ယင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကူညီပါသည်။
မြေဆီလွှာ pH (Soil pH) – MicrobeBio ထုတ်ကုန်များသည် ဆိုးရွားသော ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင် အကောင်းဆုံး မြေဆီလွှာ pH အနေအထားကို ရရှိစေပါသည်။
မြေဆီထဲရှိ အငန်ဓာတ်လျှော့ချခြင်း (Reducing The Salinity in Soil) – MicrobeBio သည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ မြေဆီလွှာ ပြုပြင်သည့်အရာဖြစ်ပြီး မြေဆီထဲ၌ ပါဝင်သော ဆားဓာတ်ပမာဏ ဖြစ်သော မြေဆီလွှာ အငန်ဓာတ်၏ သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရာတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။ ထိုသို့လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ဘက်တီးရီးယားများကို အသုံးပြုပါသည်။
အဆိုပါ အာဟာရဓာတ်များကို မည်သို့ရယူနိုင်မည်နည်း။ အက်ဆစ်ဓာတ်ပါသော မြေဆီလွှာက ထိုအာဟာရဓာတ်များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် သဘာဝအတိုင်းဖြိုခွဲသော်လည်း များသောအားဖြင့် မြေဆီထဲရှိ ဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုများက ထိုအာဟာရဓာတ်များကို အပင်များမှ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖြိုခွဲထုတ်လွှတ်ပေးရပါသည်။ MicrobeBio နှင့်ဆိုလျှင် အဆိုပါ အာဟာရဓာတ်များကို ဖြိုခွဲပေးသည့် အကျိုးပြု အဏုဇီဝပိုးမွှား ထောင်ပေါင်းများစွာကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ မြေဆီလွှာအငန်ဓာတ်ကို လျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။ အဏုဇီဝပိုးမွှားများသည် မြေဆီလွှာထဲရှိ အော်ဂဲနစ်အရာဝတ္ထုကို အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်များအဖြစ် ဖြိုခွဲပြီး ယင်းတို့က မြေဆီလွှာထဲရှိ ဆားကဲ့သို့သော အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အပင်များအနေနှင့် ဆားကို စုပ်ယူမှု လျော့ကျသွားပြီး အာဟာရများကို စုပ်ယူမှု ပိုများလာစေပါသည်။ ဓာတုနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ဓာတုဗေဒ မြေသြဇာများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ယင်းတို့သည် မြေဆီလွှာထဲ၌ မပျော်ဝင်သော အာဟာရများကို ထုတ်လွှတ်နိုင်အောင် ကူညီပေးသည့် ပိုးမွှားများ အပါအဝင် အကျိုးပြုပိုးမွှားအားလုံးကို သုတ်သင်ပစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သင့်အပင်များ သန်မာအောင် ဓာတုဗေဒ မြေသြဇာများကို သင်က အဆက်မပြတ် အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်သည်။ MicrobeBio ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ မြေဆီထဲရှိ သက်ရှိပိုးမွှားများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အဏုဇီဝပိုးမွှားများက နှိုးဆွပေးပြီး အဆိုပါ အာဟာရဓာတ်များကို ထုတ်လွှတ်ပေးရန်နှင့် မြေဆီလွှာမှ ကိုယ်ပိုင်မြေသြဇာ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် အခက်အခဲတစ်ခုမှာ ဘက်တီးရီးယား တစ်မျိုးတည်းကို အသုံးပြုရုံဖြင့် သတ်မှတ်ရင်းမြစ် တစ်ခုမှ အာဟာရတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ သန်းနှင့်ချီသော ဘက်တီးရီးယားနှင့် ပရိုတိုဇွများ အားလုံးသည် အပင်အတွက် အာဟာရများ ထုတ်လွှတ်ရာ၌ မတူညီသော လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဥပမာ သင်သည် ရေပိုက်များပြင်ရန်အတွက် ပိုက်ဆက်သမားတစ်ယောက် လိုအပ်ပြီး ခေါင်မိုးပြင်ရန်အတွက် လက်သမားတစ်ယောက် လိုအပ်သကဲ့သို့ပင် ဇီဝဗေဒတွင်လည်း ထိုသဘောအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကံကောင်းသည့်အချက်မှာ အပင်များက အမြစ်ထဲရှိ ရေနှင့် အာဟာရဓာတ်များ စုပ်ယူကာ အမြစ်စိမ့်ထွက်ရေ (exudates) ဟုခေါ်သော သကြားဓာတ်များကို မြေဆီထဲရှိ ဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုများအား အာဟာရဖြည့်တင်းရန်အတွက် စနစ်တကျ ပြန်လည်စွန့်ထုတ်ပါသည်။ ဤအတွက် နမူနာတစ်ခုမှာ အပင်တစ်ပင်သည် သွပ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ကာဘွန်ဓာတ် အချို့ လိုအပ်သည်စိုပါစို့။ အပင်သည် အချို့သော သကြားဓာတ်များကို အပင်၏အမြစ်များမှတစ်ဆင့် ဘက်တီးရီးယားအချို့ထံ အာဟာရဖြည့်တင်းပေးလျှင် ထိုဘက်တီးရီးယားက သွပ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ကာဘွန်ဓာတ်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးသည့်အတွက် အပင်သည် သွပ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ကာဘွန်ဓာတ်ကို စုပ်ယူပြီး အခက်အခဲမရှိ ဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်ပါသည်။ အပင်သည် အချို့သော သတ္တုဓာတ်ထုတ်လွှတ်ပေးသည့် ဘက်တီးရီးယားများကို အာဟာရဖြည့်တင်းပေးသည်။ ဘက်တီးရီးယားက ထိုအရာဝတ္ထုကို သတ္တုဓာတ်ဖြစ်စေသည်။ ထိုအခါ အပင်က စုပ်ယူလိုက်သည်။ MicrobeBio သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဘက်တီးရီးယားမျိုးဝင် အဏုဇီဝပိုးမွှား သန်းထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့် အာဟာရဓာတ်များ ဖြိုခွဲပေးခြင်းအားဖြင့် ထိုစနစ်သည် ပိုမိုထိရောက်လာသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်က အစားအသောက်များကို ဘာကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသလဲ။ အပင်များသည် အာဟာရဓာတ်များကို ၎င်းတို့၏ အမြစ်များမှ ရရှိပြီး အလင်းဖြင့်အစာချက်မှု (photosynthesizing) ပြုလုပ်ကာ ဆက်လက်ရှင်သန်နှင့် ရောဂါကင်းရန်အတွက် ဒြပ်ပေါင်း အသစ်များ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပါသည်။ အပင်များသည် ကစီဓာတ်၊ အဆီ၊ ပရိုတင်းနှင့် အခြားအကျိုးပြု ဒြပ်ပေါင်းများကို လူသားများကဲ့သို့ပင် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အသုံးများသော ဓာတ်မြေသြဇာ အများစုက အပင်များကို ကစီဓာတ် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လွယ်ကူစေသော်လည်း အဆီနှင့် ပရိုတင်းများမှာ ဓာတုဗေဒရုပ်သွင် ပိုမိုရှည်လျားသည့် ရှုပ်ထွေးသောဒြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ ယင်းတို့ကို အစာချက်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြေဆီထဲရှိ သတ္တုဓာတ် အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀ မှ ၆၀ အထိကို သင့်တော်သော ပမာဏအတိုင်း လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ MicrobeBio ထဲရှိ အဏုဇီဝပိုးများက မြေဆီလွှာကို နှိုးဆွပေးသောကြောင့် မြေဆီလွှာသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ဒြပ်ပေါင်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်စွာ သဘာဝအတိုင်း ဖန်တီးနိုင်အောင် ကူညီပါသည်။
ဤအချက်က သင့်ကိုဘာကြောင့် ပိုမိုကျန်းမာစေသလဲ။ MicrobeBio အဏုဇီဝပိုးများသည် သင့်အပင်များက လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်နှင့် သတ္တုဓာတ် အားလုံးကို ပေးစွမ်းနိုင်အောင် ကူညီသောကြောင့် အပင်များက ပရိုတင်းနှင့် အဆီများ ပိုမိုတည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ အဏုဇီဝပိုးများသည် သင့်အပင်များက သတ္တုဓာတ်၊ ဗီတာမင်၊ ရောဂါကာကွယ်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများ (phytochemicals) နှင့် ၎င်းတို့လိုအပ်သော အဓိကအဆီများ ဖန်တီးနိုင်အောင်လည်း ကူညီပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အပင်စနစ်သည် အပြည့်အဝ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လာပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးများပြားသော ဒြပ်ပေါင်းများကို သဘာဝအတိုင်း ထုတ်လုပ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက MicrobeBio ကြောင့် သင့်အပင်များသည် ပိုးမွှားနှင့် ရောဂါများကိုလည်း ပိုမိုခံနိုင်ရည် ရှိလာပါသည်။ အော်ဂဲနစ် ဇီဝဗေဒနည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးသူများသည် အားလုံးအဆင်ပြေနေချိန်တွင် သူတို့စိုက်ခင်းများထဲ၌ မည်သည့်ပိုးမွှားမျှ မတွေ့ရှိရပါ။ ထိုသို့သော အခြေအနေကို MicrobeBio ၏ အဏုဇီဝပိုးမွှားများက လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် လူတိုင်းရရှိနိုင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ထို့ပြင် MicrobeBio သည် မြေဆီလွှာထဲရှိ အော်ဂဲနစ် ကာဘွန်ပမာဏကို အကောင်းဆုံး အကျိုးပြုမှုများ ပေးနိုင်အောင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ကာဘွန်ကို သိသိသာသာ တိုးပွားလာစေနိုင်ပါသည်။
အဏုဇီဝပိုးမွှားများသည် မြေဆီလွှာထဲတွင် လုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးစုံကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းအားလုံးမှာ အပင်များကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းဖြင့် ကူညီသည်သာဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ အချို့က အပင်များကို အပူဒဏ် လွန်ကဲမှုများကို ပိုမိုခံနိုင်ရည် ရှိစေပြီး အချို့က ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များ ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ အချို့သော အဏုဇီဝပိုးမွှားများက မိုးခေါင်ရေရှားမှုနှင့် ပိုးမွှားများဒဏ်ကို ပိုခံနိုင်ရည် ရှိစေပြီး အချို့က အပင်၏ လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ် စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ အချို့သော အဏုဇီဝပိုးမွှားများသည် မြေဆီထဲရှိ အခြားသော ဒြပ်စင်များကိုပင် ဖြိုခွဲကာ ယင်းတို့၏ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များကို သီးနှံများက ပိုမိုလွယ်ကူစွာ စုပ်ယူနိုင်အောင် အကူအညီပေးပါသည်။
MicrobeBio® ထုတ်ကုန်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
သီးနှံထွက်နှုန်းကို သိသာစွာ တိုးတက်စေခြင်း
ဓာတုမြေသြဇာ အသုံးပြုရမှု လျှော့ချပေးခြင်း
ပိုးသတ်ဆေး၊ အပင်သတ်ဆေးနှင့် မှိုသတ်ဆေးများ အသုံးပြုရမှု လျှော့ချပေးခြင်း
အဖိုအိုင်းယင်းဓာတ် (Cat-ion) လဲလှယ်နိုင်စွမ်း ပိုကောင်းစေခြင်း
ယခင်ကပျက်စီးထားသော မြေဆီလွှာကို ပြန်ကောင်းအောင် ကုစားပေးခြင်း
အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြိုကွဲမှုကို ပိုမြန်စေခြင်း
ပိုမိုကြီးမား နက်ရှိုင်းပြီး ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးသော အမြစ်စနစ်ကို ဖန်တီးပေးခြင်း
အရသာပိုရှိသော သစ်သီးဝလံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရရှိစေခြင်း
အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်ကင်းခြင်း၊ GMO မဟုတ်ခြင်း
ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်းများ၊ ကျန်းမာသော မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ
မြေဆီထဲမှ အော်ဂဲနစ်ကာဘွန်ကို သိသာစွာ တိုးတက်စေခြင်း
မြေဆီထဲရှိ ဆိုဒီယမ်နှင့် သိပ်သည်းဆများသော သတ္တုဓာတ်များ (heavy metals) ကို လျှော့ချပေးခြင်း
MicrobeBio ကို အသုံးပြုသောအခါ အကျိုးပြု အဏုဇီဝပိုးမွှား သန်းထောင်ပေါင်းများစွာကို မြေဆီလွှာထဲသို့ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး အပင်စနစ်ထဲရှိ အာဟာရများကို ဖြိုခွဲပေးခြင်းနှင့် အရာအားလုံးကို ညီမျှစေခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြေဆီလွှာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုအခါ ပိုမိုကျန်းမာသော မြေဆီလွှာများ၊ အပင်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားများ ဖြစ်လာပါသည်။ အကြောင်းမှာ မြေဆီလွှာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထဲတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများ ပိုမိုနည်းပါးသွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာသော မြေဆီလွှာနှင့် အပင်များဖန်တီးရေးအတွက် ရှုပ်ထွေးသော အကြောင်းအရာများကို သတိပြုကာ သင့်ကိုယ်ပိုင် အာဟာရဓာတ်ကို MicrobeBio ဖြင့် စိုက်ပျိုးလိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ MicrobeBio® သည် လယ်သမားများအား သီးနှံထွက်နှုန်း သိသာစွာ တိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော အစားအသောက်ရင်းမြစ်များ ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် သဘာဝ၏ စွမ်းအားကို ရယူပြီး မြေဆီလွှာပျိုးထောင်နိုင်ရန် ကူညီပေးလိုပါသည်။ MicrobeBio သည် ကျန်းမာပြီး ရေရှည်ခိုင်မာသော အပင်ကြီးထွားမှုဖြစ်စေသည့် အားကောင်းသော ဂေဟစနစ်များကို ဖန်တီး ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆီလျော်သော ထုတ်ကုန်များ ပေးအပ်နိုင်ရန် ကတိကဝတ်ပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်များမှာ အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ခြင်း၊ GMO မဟုတ်ခြင်း၊ အဆိပ်အတောက် မရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဏုဇီဝပိုးမွှား သန်းတစ်ထောင်ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်၊ ကျန်းမာပြီး ရေရှည်ခိုင်မာသော ဘဝနေထိုင်မှုကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါ။
“သဘာဝရဲ့ နက်ရှိုင်းမှုကို ဖွေရှာမယ်ဆိုရင် အရာအားလုံးကို ဒီထက်ပိုပြီး နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။”
-အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း (Albert Einstein)
MicrobeBio® တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုသည် ဇီဝဗေဒ ပိုးသတ်ဆေးများ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးနယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိထားပါသည်။ MicrobeBio® သည် ထူးခြားပြီး သီးသန့်ရပ်တည်သော ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေး ပိုးသတ်ဆေးများစွာကို ထုတ်လုပ်ထားပြီး ယင်းတို့မှာ အရေးကြီးသော ပိုးမွှားများနှင့် ရောဂါများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော အခြားဓာတုဗေဒဆေးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေး ပိုးသတ်ဆေးများ၊ မှိုသတ်ဆေးများ၊ သန်ကောင်သတ်ဆေးများနှင့် အပင်သတ်ဆေးများဖြင့် အကောင်းဆုံး အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
MicrobeBio® ပိုးသတ်ဆေးများကို ဘက်တီးရီးယား၊ အပင်များနှင့် သတ္တုဓာတ်များ စသည့် သဘာဝပစ္စည်းများမှ ရယူထုတ်လုပ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် လူကိုအဆိပ်အတောက် မဖြစ်စေသည့်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နည်းပါးပါသည်။ ဓာတုနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် ပိုးသတ်ဆေးများမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုရှိပြီး ယင်းတို့ကို သုံးစွဲသည့်ကာလထက် ပိုမိုရှည်ကြာစွာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထဲ၌ တည်ရှိနေပါသည်။ MicrobeBio® ပိုးသတ်ဆေးများမှာ လွယ်ကူစွာ ပြိုကွဲနိုင်သောကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထဲတွင် ရှည်ကြာစွာ မတည်ရှိသဖြင့် ထိခိုက်မှု နည်းပါးသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
ဓာတုဗေဒ ပိုးသတ်ဆေးများ အသုံးပြုခြင်းသည် မြေဆီလွှာထဲရှိ အာဟာရဓာတ်များ လျော့နည်းစေပြီး အာဟာရပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် သဘာဝ အဏုဇီဝပိုးမွှားများအပေါ်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။ ဓာတုဗေဒ မြေသြဇာများသည်လည်း ကင်ဆာ၊ အာရုံကြောစနစ် ရောဂါများ၊ ဦးနှောက်အာရုံကြောရောဂါများ၊ ပြန်ရည်အကျိတ်၊ ပန်းနာရင်ကြပ် အစရှိသော ပြင်းထန်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ MicrobeBio® ပိုးသတ်ဆေးများမှာ အဆိပ်အတောက် မရှိသလို သဘာဝရင်းမြစ်များမှ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ ဓာတုဗေဒ ပိုးသတ်ဆေးများထက် တန်းတူ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသော ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယင်းတို့သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု နည်းပါးပြီး မြေဆီလွှာနှင့် အပင်များကို အန္တရာယ်မပေးဘဲ ရောဂါဘယ ကင်းဝေးစေပါသည်။ ရောဂါကင်းသော မြေဆီလွှာသည် အပင်များ၏ သဘာဝကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ အပင်ရောဂါပိုးမွှားများကို တားဆီးပေးပါသည်။ ကပ်ပါးပိုး အင်းဆက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ ကြီးထွားမှုအတွက်လည်း အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
MicrobeBio® သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆများ ရရှိအောင် သီးသန့်ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများ ဖန်တီးပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့တွင် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ အမျိုးမျိုးရှိပြီး၊ အအေးခံ သိမ်းဆည်းစရာ မလိုသည့်အပြင် ကြာရှည်သိမ်းဆည်းထား၍လည်း ရပါသည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိကွင်းဆင်းအသုံးပြုမှု အလေ့အထများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဤထုတ်ကုန်များကို ဖော်မြူလာ ထုတ်ထားပါသည်။ မှိုသတ်ဆေးများ အပါအဝင် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ဆေးအများအပြားနှင့်လည်း ကိုက်ညီမှု ရှိပါသည်။
MicrobeBio® တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဈေးကွက်ထဲရှိ အကောင်းမွန်ဆုံး ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေး ပိုးသတ်ဆေး အမျိုးမျိုးကို ပေးအပ်ပါသည်။ သင့်မြေဆီလွှာကို ခြောက်ခန်းစေပြီး သင့်ကျန်းမာရေးကို ယိုယွင်းစေသော ခေတ်မမီတော့သည့် ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများထက် ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုးသတ်ဆေးများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆီလျော်ကာ အဆိပ်အတောက်ကင်းသည့် ရွေးချယ်စရာများ ဖြစ်ပါသည်။ သင့်လိုအပ်ချက်တိုင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလွန်ကောင်းသည့် ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေး လက်ရွေးစင် ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်း သင့်မြေဆီလွှာနှင့် အပင်များ ရောဂါကင်းဝေးရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါ။
MicrobeBio® သည် သင့်မြေဆီလွှာ၊ အပင်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် သဘာဝမှရရှိသည့် အဆိပ်အတောက်ကင်းသော ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများကို ပေးအပ်ပါသည်။ ခေတ်မမီတော့သည့် ဓာတုပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆက်လက်ထိခိုက်အောင် မပြုလုပ်သင့်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို နောင်လာမည့် မျိုးဆက်များစွာတိုင် ထိန်းသိမ်းပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ကတိကဝတ်ပြု ကြိုးပမ်းကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Bionematicides X1။ ။ ၎င်းသည် သဘာဝစစ်စစ်ဖြစ်သော သန်ကောင်သတ်ဆေးဖြစ်ပြီး Purpureocilliumlilacinum ဇီဝအမျိုးအစား (biotype) ပါဝင်ပါသည်။ Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus နှင့် Rotylenchus စသော အပင်ရောဂါဖြစ်စေသည့် သန်ကောင်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ ဤဇီဝအမျိုးအစားသည် သန်ကောင်၏ မျိုးပွားမှုအဆင့်တိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ဥများနှင့် အမများတွင် တွယ်ကပ်ပြီး ပုံပျက်စေခြင်း၊ မျိုးဥများ ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ဥပေါက်ပွားမှု လျှော့ချခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါသည်။ Bionematicides X1 သည် အပင်၏အမြစ်စနစ်ကို ကာကွယ်ရင်း သန်ကောင် အကောင်ရေကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ဤကာကွယ်မှုသည် အမြစ်များကို လွတ်လပ်စွာ ကြီးထွားစေပြီး ရောဂါကင်းသော အမြစ်စနစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးလာစေပါသည်။ Bionematicides X1 သည် မီးစုန်းဓာတ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အကျိုးပြု အဏုဇီဝပိုးမွှားများ ပေါက်ပွားမှုကိုလည်း အားပေးသောကြောင့် အမြစ်များက အာဟာရကို ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီး အပင်များကို ပိုမိုကျန်းမာစေပါသည်။ Bionematicides X1 တွင် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ပမာဏဖြစ်သည့် ၉၀% ကျော် သက်ဝင်လှုပ်ရှားသည့် ပိုးအမျိုးအစား (spores) ထုန်ကုန်တစ်ပေါင်လျှင် ပါဝင်သောပမာဏ (4 x 10^9 spores per gram) ရှိပါသည်။ Bionematicides X1 သည် နောက်ထပ် ပေါင်းထည့်စရာဆေးများ မလိုအပ်ဘဲ ၎င်း၏ဖော်မြူလာသည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို pH 2-13 ကဲ့သို့ အခြေအနေဆိုးများနှင့် <150 ppm ရှိသည့် အာနိသင်ပြင်းသည့်ရေများ ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဤထုတ်ကုန်များကို တစ်နှစ်တာ သိုမှီးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အပူချိန် 68°F (20°C) အထိ ရှိသည့်နေရာ၌ သိုလှောင်ထားနိုင်ပါသည်။
BioRational X2။ ။ ၎င်းသည် ပိုးမွှားများ (Spores) က အင်းဆက်၏ကိုယ်ခွံထဲသို့ တိုက်ရိုက်ကူးစက်ဝင်ရောက်သည့် ထူးခြားသည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုပုံစံရှိသည့် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ပိုးမွှားများသည် ဝင်ရောက်မည့်အကောင်ကို ကပ်တွယ်ပြီး အင်ဇိုင်းများ ပေါက်ပွားထုတ်လုပ်ကာ ကိုယ်ခွံကို တိုက်ခိုက်ချေဖျက်ပစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိုးမွှားများသည် အရေပြားထဲ ထိုးဖောက်ပြီး အင်းဆက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ပြန့်နှံ့သွားပါသည်။ BioRational X2 သည် အင်ဆက်များ၏ ကနဦး အဆင့်များကို ထိန်းချုပ်သောကြောင့် အကောင်ရေ ပြန့်ပွားမှုမဖြစ်အောင်နှင့် ဖြစ်ပြီးမှပြန်လည်ကုသရသည့် စရိတ်များ မရှိအောင် ကာကွယ်ပေးသည့်အတွက် အကုန်အကျ သက်သာပါသည်။ ထိုအခါ နောက်ထပ် အသုံးပြုရမှုများ မရှိဘဲ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှု ပပျောက်သွားပါသည်။ အဆိုပါ အချက်များကြောင့် BioRational X2 သည် မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မပါဝင်သလို၊ ဓာတုဗေဒ ပိုးသတ်ဆေးများထက် ပိုမကောင်းလျှင်တောင်မှ တန်းတူနီးပါး ထိရောက်မှု ရှိပါသည်။ BioRational X2 သည် ဖန်လုံအိမ်ထဲ၊ လယ်ကွင်းထဲနှင့် ပျိုးပင်များထဲရှိ ကိုယ်ခွံပျော့ အင်းဆက်များစွာ၊ ဥပမာ ယင်ကောင်ဖြူ၊ လှေးပိုး၊ ပျပိုး၊ ဖြုတ်စိမ်းပိုး၊ မီးလီပိုး၊ စခရပ်ချေးပိုးထိုး၊ အပင်ပိုးများနှင့် ဆန်ပိုး တို့ကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။
Biobontani X3။ ။ ၎င်းသည် အင်းဆက်ပိုးမွှားထံသို့ တွယ်ကပ်ပြီး ပျက်ပြယ်မသွားစေရန် ထူးခြားသည့် ဖော်မြူလာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဖော်မြူလာနှင့် ထိတွေ့သည်နှင့် အင်းဆက်ပိုးသည် သေဆုံးသွားပါမည်။ Biobontani X3 ကို ကျွဲနွား၊ ကြက်ငှက်၊ ဝက်တို့ပေါ်ရှိ မွှားများ၊ ကမျဉ်းနီကောင်များနှင့် လှေးများ သေစေရန် သုံးနိုင်ပါသည်။ Biobontani X3 တွင် အခြားပြိုင်ဘက် အမှတ်တံဆိပ်များထက် ပိုမိုထိရောက်သည့် ပိုင်ရီသရမ် (Pyrethrum) ပါဝင်ပြီး ယင်းကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အရည်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးနည်း (High-Performance Liquid Chromatography) ဖြင့် အသိအမှတ် ပြုထားပါသည်။ Biobontani X3 သည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွဲထင်မကျန်ရစ်သလို သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန် ကြားကာလ မရှိခြင်း (“0” PHI) သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် သုံးစွဲမှု ကန့်သတ်ချက် မရှိခြင်းကြောင့် သီးနှံရိတ်သိမ်းသည့်နေ့မှာပင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Biobontani X3 သည် တစ်ကမ္ဘာလုံး အသိအမှတ်ပြု အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး USDA NOP, EU နှင့် JAS သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သင့်သီးနှံများအတွက် ကို အသုံးပြုပြီးနောက် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် ကြားကာလ (Re-entry interval, REI) ၁၂ နာရီအထိ တိုတောင်းသောကြောင့် အချိန်အလဟဿဖြစ်ခြင်း မရှိပါ။
Biobontani X3: is an insecticide withaunique formulation that sticks to insects and doesn’t wash off. This ensures the insect will die once it has come into contact with the formula. Biobontani X3 can be used to treat ticks, mites and fleas on cattle, chickens, pigs. Biobontani X3 hasahigher potency Pyrethrum than other competitive brands, as validated by High-Performance Liquid Chromatography testing. Biobontani X3 is also non-persistent in the environment and may be applied on day of harvest with no pre-harvest interval (“0” PHI) or annual application restrictions. Biobontani X3 is globally certified organic: compliant with USDA NOP, EU and JAS requirements. No downtime withashort 12 hour field re-entry interval (REI) after you have applied to your crops.
Biofungicides X4။ ။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော အပင်ပိုးမွှားများ စုဖွဲ့လာမှုကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ပြီး ယင်း၏ အကျိုးပြုအာနိသင်များကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းများမှာ အမြစ်၏ မျက်နှာပြင်များကို ဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုးမွှားတွယ်ကပ်မည့် နေရာများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ အကျိုးပြု နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် မီးစုန်းဓာတ် ပြုလုပ်သော ဘက်တီးရီးယားများ လွတ်လပ်စွာ ပေါက်ပွားနိုင်စေသည့် ကြီးထွားမှုနှိုးဆွပစ္စည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ ဖြိုခွဲခြင်းဖြင့် ပိုမိုများပြားသော အာဟာရများကို ပိုကောင်းသည့် အပင်၏ အမြစ်စနစ်က စုပ်ယူစေခြင်း။ အန္တရာယ်ပေးသည့် မှိုများပေါက်ပွားမှုကို တားဆီးသော တားမြစ်တတ်သည့် အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်များ၊ အင်ဇိုင်းများနှင့် အခြားဒြပ်ပေါင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ရောဂါဖြစ်စေသော မှိုများကို တွယ်ကပ် သတ်ဖြတ်ခြင်း။ Biofungicides X4 တွင် Trichodermaviride ဇီဝအမျိုးအစား ပါဝင်ပြီး ယင်းမှာ Fusariumoxysporum, Rhizoctoniasolani, Sclerotiumcepivorum, Pythiumultimum နှင့် Phytophthorainfestans အစရှိသည့် အပင်ရောဂါ ဖြစ်စေသော အရေးကြီးသည့်မှိုများကို ကူးစက် ဖျက်ဆီးပစ်ပါသည်။ Biofungicides X4 သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆီလျော်ပြီး အကျိုးပြု အင်းဆက်များ၊ ငှက်များ၊ ငါးများနှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများပေါ်တွင် အန္တရာယ်မရှိပါ။ ၎င်းသည် ဇီဝဆိုင်ရာ ပျက်ယွင်းနိုင်စွမ်း (biodegradable) ရှိသောကြောင့် စွဲကျန်ရစ်မှု နည်းပါးပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းသွားပါသည်။
Biofungicides X5။ ။ ၎င်းသည် MicrobeBio® မှ ထုတ်လုပ်သည့် နောက်ဆုံးမျိုးဆက် ဇီဝမှိုသတ်ဆေးထုတ်ကုန် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Bacillus subtilis အခြေခံ ဈေးကွက်ထဲရှိ အခြားဇီဝမှိုသတ်ဆေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရနိုင်ပါ။ ရေနှင့်အဆီမျှခြေ (hydrophilic-lipophilic balance, HLB) နှင့် EC ဖော်မြူလာ၏ အိုင်းယွန်းဓာတ်များက သက်ဝင်လှုပ်ရှားသော ပါဝင်ပစ္စည်းကို ၎င်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိစေပြီး အရွက်မျက်နှာပြင်နှင့် အပင်ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်တွင် တွယ်ကပ်စေပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် အပင်ဆဲလ်များ (foliar mesophyll) ထဲသို့ ဖောက်ထွင်းသွားနိုင်ကာ ထိုနေရာတွင် စနစ်တစ်ခုလုံးသို့ သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း Biofungicides X5 တွင် အခြားအလားတူ ထုတ်ကုန်များထက် အာနိသင်ပိုရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤဖော်မြူလာကြောင့် ဤထုတ်ကုန်ကို အပူချိန် 30ºC (86ºF) တွင် သိုမှီးထားနိုင်ပြီး အသုံးပြုရန်အတွက်လည်း မည်သည့်အထူး အခြေအနေမျှ မလိုအပ်ပါ။ Biofungicides X5 တွင် အောက်ပါတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် အပင်ရောဂါပိုးမွှား မြောက်မြားစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ။ အရွက်အစက်အပျောက်ရောဂါ (Mycosphaerellafigiensis)၊ စပါးပင်မှိုစွဲရောဂါ (Rhizoctoniasolani)၊ အာလူးပုပ်ရောဂါ (Phytopthorainfestans)၊ အရွက်မဲမှိုရောဂါ (Colletotrichumgloesporioides)၊ အရွက်ပုပ်ရောဂါ (Ramularia areola)၊ အရွက်မှိုစွဲရောဂါ (Oidium spp.)၊ အရွက်မွေးနုမှိုစွဲရောဂါ (Pernosporasparsa) နှင့် သံချေးရောင်မှိုစွဲရောဂါ (Hemileiavastatrix)။ Biofungicides X5 သည် ဘက်တီးရီးယားကြောင့် နွမ်းကြေမှု ဖြစ်စေသော Ralstoniasolanacearum ၊ စပါးဖူးငုံပျက်စီးမှု ဖြစ်စေသော Burkholderiaglumae နှင့် Erwiniacarotovora ပိုးမှ ထုတ်လုပ်သော ခြေထောက်မဲပိုး စသည့် ဘက်တီးရီးယားများကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပါသည်။
BioRational X6။ ။ ၎င်းသည် MicrobeBio® က ထုတ်လုပ်သော ဖော်မြူလာထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို Beauveriabassiana GHA အမျိုးအစားနှင့် သန့်စင်ထားသော ပိုင်ရီသရမ်အနှစ် (Refined Pyrethrum Extract) တို့တွင် အခြေခံကာ အင်းဆက်ပိုးမွှား ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် နောက်ဆုံးမျိုးဆက် ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေး ပိုးသတ်ဆေးများအတွက် ရေတွင်ပျော်ဝင်သည့် ဖြန့်ကျက်နိုင်သောအဆီ (OD) နှင့်အတူ ဖော်မြူလာထုတ်ထားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများအရ GHA အမျိုးအစားနှင့် သဘာဝ ပန်းဥယျာဉ်မှ ပိုင်ရီသရင်တို့၏ ဓာတ်ပြုမှုမှာ လုပ်ဆောင်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံမျိုးစုံရှိပြီး အခြားဓာတုထုတ်ကုန်များ သုံးရာမှ ရရှိသည့် ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေးရလဒ်များနှင့် တူညီပါသည်။ ထို့ကြောင့် BioRational X6 သည် အော်ဂဲနစ်ဥယျာဉ်များ အပါအဝင် သီးနှံအမျိုးအစား အားလုံးပေါ်မှ ကမျဉ်းနီကောင်များ၊ ယင်ကောင်ဖြူ၊ လှေးပိုး၊ ဖြုတ်စိမ်းပိုး၊ မီးလီပိုး၊ အခွံပျော့ပိုး၊ ရွက်စားနှံကောင်နှင့် အပင်နှံကောင်များ၊ အစေ့ထိုးပိုး၊ အပင်ပိုးများ၊ ဖောက်ပိုးများ၊ အရွက်စားအင်းဆက်များ၊ စခရပ်ချေးပိုးထိုးနှင့် အရွက်စားချေးပိုးထိုးများကို ထိန်းချုပ်နည်းသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ BioRational X6 ကို ကျွဲနွား၊ ကြက်ငှက်နှင့် ဝက်များပေါ်မှ လှေးများ၊ ကမျဉ်းနီကောင်များနှင့် လှေးများကို သတ်ရန်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ BioRational X6 ထဲရှိ ပိုင်ရီသရမ်သည် သဘာဝပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး သာမန်ထိတွေ့ရုံဖြင့် လူသားနှင့် တိရစ္ဆာန်များအပေါ်တွင် မပြောပလောက်သည့် အန္တရာယ်သာ ရှိပါသည်။ BioRational X6 သည် နောက်ထပ် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ မလိုအပ်ဘဲ ၎င်း၏ ဖော်မြူလာသည် သတ်ဝင်လှုပ်ရှားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဆိုးရွားသော အခြေအနေများမှ ကာကွယ်ပြီး အပူချိန် 80°F (27°C) အထိရှိသည့်နေရာ၌ သိုလှောင်ထားနိုင်ပါသည်။
Transitory Yellowing (Nephotetti cincticeps)
Tungro (Nephotetti malayanus)
Acrida cinerea (Thunberg)
Aiolopus tamulus (Fabricius)
Atractomorpha chinensis Bolivar
Catantops acuticercus Bolivar
Oxya chinensis (Thunberg)
Patanga succincta (Johan)
Pseudo ya diminuta (Walker)
Quilta oryzae Uvarov
Trilophidia annulata (Thunberg)
Gryllotalpa orientalis Burmeister
Cofana spectra (Distant)
Empoasca motti Pruthi
Empoasca flavescens (Fabricius)
Idioscopus clypealis (Lethierry)
Nephotetti nigropictus (Stal)
Nephotetti vivescens (Distant)
Helicoverpa Armigera Hibber
Parasa Consocia Walker
Recilia dorsalis (Mots.)
Tettigoniella ferruginea (Fabricius)
Dundubia nagarasagma Distant
Haphsa biudusara Distant
Purana pigmentata Distant
Purana samia Walker
Platypleura hilpa Walker
Laodelpha striatellus (Fallen)
Nilaparvata bakeri Muir
Lawana imitata Melichar
Ricania pulverosula Stal
Callitettix versicolor Fabricius
Diaphorina citri (Kuwayama)
Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Barker
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Aleuroclava jasmini Takahashi
Aleuroclava subindica Martin & Mound
citrus whitefly – Dialeurodes citrius
Spiraling Whitefly – Aleurodicus dispersus
Giant Whitefly – Aleurodicus dugesii Cockerell
BioHerbicides X9။ ။ ၎င်းသည် ရွေးချယ်သက်ရောက်မှုမရှိသည့် နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်သော အပင်သတ်ဆေးဖြစ်ပြီး ပေါင်းပင်များ၊ မြက်များနှင့် အရွက်ကြီးပေါင်းပင်များကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် သုတ်သင်ပါသည်။ BioHerbicides X9 သည် (20oF အထိနည်းပါးသည့်) အေးမြ အုံ့မှိုင်းသော အခြေအနေများတွင် လုပ်ဆောင်ပြီး လက်ဖြင့်ပေါင်းသင်ခြင်း၊ မီးခိုးတိုက်ခြင်း၊ ရိတ်ဖြတ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အခြားသော သဘာဝအပင်သတ်ဆေးများအစား ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သော d-limonene (သံပုရာအဆီ) သည် ချောမွေ့သော အပင်အခွံကို သဘာဝနည်းဖြင့် ခွာပစ်ပြီး ယင်းကို ခြောက်သွေ့ပြီး သေဆုံးသွားစေပါသည်။ အမေရိကန် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာန (Food and Drug Administration, FDA) က d-Limonene ကို အချို့သော အသုံးပြုမှုများအတွက် စိတ်ချရသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်း (Generally Recognized As Safe, GRAS) ရှိပါသည်။ အားတိုးဆေးမဟုတ်သောဆေးကို လူ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် တောတွင်းသတ္တဝါများ အနီးရှိ နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ BioHerbicides X9 သည် ရှားစောင်းပြသာဒ်၊ စကော့တလန်ဆူးလေပင်၊ မုန်ညင်းမျိုးဝင်အရိုင်းပင်၊ သုံးရွက်ဆိုင်ပဲရိုင်းပင်၊ မွေးပွပန်းပင်၊ တောင်ဝှေးသီးပင်၊ ဒန်ဒလီယန်ပင်၊ မြေလျှောက်ရွက်ကြီးပင်၊ ဘာမြူဒါမြက်၊ ရစ်လိမ်နွယ်ပင်၊ ဂျွန်ဆင်မြက်၊ မုန်ညင်းမျိုးဝင်အရိုင်းပင်နှင့် ကွမ်းကတိုးပင်…. စသည်တို့ အပါအဝင် ပေါင်းပင်၊ အရွက်ကြီးပေါင်းပင်နှင့် မြက်ပင် အများစုကို သီတင်းပတ်များစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။
BioHerbicides X9: isanon-selective, post emergence herbicide that quickly and effectively kills weeds, grasses, and broadleaves without causing harm to the environment. The product is designed for organic farming and all agriculture uses. BioHerbicides X9 works in cool and cloudy conditions (as low as 20oF) and is an economical alternative to hand weeding, flaming, mowing, cultivation and other natural herbicides. The active ingredient d-limonene (citrus oil) naturally strips away the waxy plant cuticle, causing it to desiccate and die. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) classifies d-Limonene as Generally Recognized As Safe (GRAS) for certain uses. Weed control microbial accelerate weed desiccation. Non-tonic can be used in areas near to people, pets and wide life. BioHerbicides X9 provides weeks of weed control on most weeds, broadleaves and grasses including: Spurge, Sow Thistle, Shepherd’s Purse, Clover, Hairy Fleabane, Crabgrass, Smooth Crabgrass, Dandelion, Whitestem Filaree, Bermuda Grass, Bindweed, Johnson Grass, Shepherds Purse and Little Mallow…